Nin u dhashay Qatar oo Darawal Soomali ah ku Tilmaamay Ey, Daayeer Madow – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Nin u dhashay Qatar oo Darawal Soomali ah ku Tilmaamay Ey, Daayeer Madow
Diblomaasi u dhashay dalka yar ee qadar, ayaa wajahaya dacwad, kadib markii uu aflagaadeeyay muwaadin Asalkiisu somali yahay, bale haysta dhalashada britain.
Diblomaasigan u dhashay dalka Qatar ayaa ku tilaamay darawalka oo isaga u shaqeynayay erayo bahdil ah sida Eey, Dameer iyo Addoon madoow intii ay ka wada shaqeynayeen safaaradda dalka Qatar ee magaalada London.
Abdullah Ali Al-Ansari oo ah diblomaasi ayaa hadda ah madaxa caafimaadka safaaradda Qatar ee dalka Britain waxaana lagu eedeynayaa inuu aflagaadeeyey Mahamoud Ahmed oo ah 79 jir ahaa darawalkiisa sidoo kale na ahaa sarkaal kamid ilaalada safaaradda ee xilliga habeenkii ah.
Diblomaasiga ayaa ninkan Somali British-ka ah ku eedeeyey intii uu socday dhageysiga dacwadooda inuu ka dalbaday lacag dhan £50,000 si uu uga aamuso kiiskan caddaalad darrada ah.
Mr Mahamoud Ahmed oo ah 79-sano jir ayaa ah muwaadin British ah islamarkaana asal ahaan kasoo jeedo dalka Somalia, waxaana shaqada safaaradda laga eryay sanadkii 2013.
Ninkan Somali Brish-ka ah ayaa sanado badan gudbinayey dacwadiisa ilaa markii dambe sanadkii 2015 ay maxkamadda racfaanku ogolaatay furidda kiiska, taasoo la micno ah in safaaraduhu aysan difaaci Karin diblomaasiyiinta ku xadgudba shaqaalaha kale ee safaaradaha.
Maxkamadda ayaa dhageysatay markii ugu horeysay kiiska dacwadda ka dhanka ah diblomaasiga reer Qatar ee lagu magacaabo A-Ansari, waxa ayna maxkamaddu sheegtay in dhageysiga dacwadda uu sii socon doono.
Mohamoud Ahmed, ayaa sheegay in lagu sameeyey midab takoor iyo faquuq dhanka da’da ah waxaana uu sheegay in markii uu shaqada ka tagayey uu dareemayay inuu yahay maxbuus oo kale, waxa uu intaas raaciyey in loogu yeeri jiray erayo uu dhibsan jiray sida: “Ninka Duqa ah”, “Eey” iyo erayo kale ay kamid yihiin Addoonka Madoow intii u dhaxeysay 2007 ilaa 2013.
Diblomaasigan reer Qatar ee lagu magacaabo Abdullah Ali Al-Ansari iyo safaaradda dalka Qatar ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, maxkamadda dalka Britain ee kiiskan gacanta ku heysana waxa ay sheegtay in dhageysiga dacwadda kiiskaan uu socon doono.